siifsiin_ – Page 13 – siifsiin
Aariin abbaa ajjeeftu, ilmatti ceeti. Abbaan booka dhugeef, ilmi afaan hin urgaa’u. Yoo abbaan iyyutu, ollaan namaa dirmata. Abiddi abbaa irra taa’e, guba. Afaan leencaa, huubni hin kajeelu. Afaan nyaata bare, bulluqa alanfata. Akkeessaa fardaa harreen lafa dhiitti. Bakka fardi hin jirre, harreetu garmaama. Bakka qeerransi ka’e, jaldeessi taa’a. Bakkuma robe, dhoqqeessa. Duruu gurraachaa ittuu … Continue reading Mammaaksa
Milkaa’ina jareenyaafi gammachuu akkamitti arganna?
Barbaadanii of argachuu Eenyummaa keef bakka guddaa kenni Hamma of beektu caalaathi ati nama guddaadha. Humna qabdu hundaatiin socho’i.  Sodaafi dhiphine of keessaa balleessi. Yeroo tokkotti tarkaanfii tokko qofa tarkaanfadhu. Rakkoolee waan guddaatti hin lakkaa’in Rakkoolee irratti mariyadha. Balbala cufuu bari Sodaawwan sababa qabatamoo irraa dhufan maal gochuu qabna. … Continue reading Milkaa’ina jareenyaafi gammachuu akkamitti arganna?
Ifa guyyaa argachuuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. (Wiiliyaam Shekipiir) Waanti nuti sodaachuu qabnu soaa qabuu soda qofadha. (Firaankiliin Runzvelti) Nama carraa qabu galaanatti yoo darbatteyyun qurxummii qabatee ba’a. (Jecha Warra Arabaa) Namni suuta deemu dafee bakka yaade ga’a. (Jecha warra chaayinaa) Daandii bakka yaadde sigeessisn utuu hinbeekin adeemsa hin jalqabin. (Jecha warra Ingilizii )
Qomoon Oromoo hundi/marti akaakuu lakkaa’a. Kun Oromiyaa cufa keessatti beekamaa dha. Aadaan kun sababa adda addaa tiin dhaloota ammaa biratti hanga tokko dagatamaa dhufaa jira. Kun ta’uu isaaf immoo sababoota garaagaraa keessaa barumsaan walqabatee haala uumamaa dhufe; dhiibbaa amantiin lammootni ummatichaa fudhatan uumee; fi dhimmichi/aadaan kun barbaachisaa ta’uu isaa irratti hubannoon gahaan kennamuu dhabuu eeruun … Continue reading FAAYIDAA AKAAKUU LAKKAA’UU
January 17, 2019 January 23, 2019 1 Comment
“Waaqa nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi” Kan nagaan nu oolchites nagaan nu bulchi Irraa goraafi dogoggora nu oolchi Tolaa nutty qabi Hamaa ammaataa nutty qabi Keenyaan nu oolchi keenyaan nu bulchi Biyyaafi qe’ee keenya irratti nu moosisi Yaa Rabbi tokko nu taasisi Yaadaafi qalbii keenya wal simachiisi Wallaalaa nuu beeksisi Beekaa nuuf bulchi Xinnaa … Continue reading Eebba Ormoo
Jechaafi gocha safun
Oromoon aadaa isaa keessatti qabata saqeeffannaa amantaa, kabaja /wayyouma/, ‘aamilee, soda, wkf qabaata. Saqaaffannee kanas gochaafi jechaan ibsata. Oromoon kallattiin du’aafi waa’ee isaa kallattiin hinhimu. Boqote – darbe – rafe – dadhabe Hirmii baafadhu – hirmii hin nyaatin – hirmii tufi Biyyon isatti/isheetti/isaanitti/haasalphatu, maqaa na dhoofte hin jedhin. Mucaatu harkaa ba’e, ulfatu irraa ba’e jedha … Continue reading Jechaafi gocha safun